Otu esi aga obodo Jaco na Costa Rica? | Akụkọ Njem
Otu esi aga obodo Jaco na Costa Rica?
Osimiri na Resorts | | Costa Rica
Jack Ọ bụ otu n’ime obodo abụọ kachasị dị ukwuu na Costa site na Pacific de Costa Rica. Ọ na-emi odude odika 80 kilomita site ọdụ ụgbọ elu nke San José. Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na Juan Santamaría International Airport, ị ga-agbaso ihe ịrịba ama ndị na-eduga na San Ramon. Mgbe kilomita isii gasịrị, were ụzọ ọpụpụ chee ihu Atenas na akara ngosi nkwụsị, tụgharịa aka ekpe. Gaa n'ihu n'okporo ụzọ ahụ ruo mgbe ị ruru San Mateo, ebe uzo buru uzo ozo. Soro uzo gi gha abia ebe etiti. Mgbe ị na-abịarukwu nso OrotoniaGa-ahụ ihe ịrịba ama na-agwa gị ka ị tụgharịa aka nri, mana esoghị ya, ma ọ bụghị na ị ga-efu na mpaghara azụmahịa. Gaa n'ihu ihu ruo mgbe ịchọta akara aka ekpe nke na-eduga Jack. Ọtọn̄ọde ke ini oro ka iso, ẹwụt kpukpru efak ẹnyụn̄ ẹwat ubomisọn̄ Jack.
foto akwụ ụgwọ: egn 66
Nwere ike ịchọta ụgbọ ala na-aga ozugbo site na Oge Bọs Coca Colana San José. Atesgwọ na-efegharị ihe dị ka $ 2. Dị ka ọzọ ọzọ, ị nwere ike ịkwọ ụgbọala si San Jose, na-aga San Ramon, ụzọ Puntarenas, ruo mgbe ị rutere Highway 27. Isi na ndịda na Highway 27 wee soro akara maka Jaco. Routezọ a dị ọsọ ọsọ karị ebe ọ bụ na ị gaghị agafe okporo ụzọ na ugwu. Akụkụ ọzọ dị mma bụ na ị nwere ike ịkwụsị na akwa ahụ Osimiri Tarcoles lebe kwa agu iyi ohia anya. I nwedịrị ike ịkwụsị n'okporo ụzọ zụta anụ ọkụkọ iji zụọ anụ ọhịa.
Ozugbo ị banyere Jack, njem dị mfe. Obodo a pere mpe nke na-esi n’otu ebe gaa ebe ọzọ. Ma mgbe ọ na-ekpo ezigbo ọkụ ma ọ bụ na-agba ọchịchịrị, ị ga-ahụ tagzi zuru ezu iji buga gị site n'otu ebe ruo ebe ọzọ. Tagzi na Jack Ha na-acha uhie uhie, yabụ ewerela tagzi ọzọ na-enweghị ụdị ọrụ ahụ. Ọtụtụ mgbe, ị ga-ahụ tagzi ndị paireti na nchekwa zuru oke, mana ọ kacha mma ka ị rapara na ụlọ ọrụ gọọmentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Costa Rica » Otu esi aga obodo Jaco na Costa Rica?
Jaco bụ ezigbo ebe ezumike. Ma iji dokwuo anya isi ihe ụfọdụ isiokwu ahụ na-egosi, nke mbụ ọdụ ụgbọ elu Juan Santamaría adịghị na San José, ọ bụ nke ógbè Alajuela na nke abụọ ọ bụghị "Orotonia" ọ bụ Orotina. All na ebumnuche na ha anaghị efu ma ọ bụ na ha na-eme ihe ọchị mgbe ha jụrụ maka ihe banyere ya.
Ebe ịzụ ahịa kachasị mma dị na Queens